Nokia သည် Android Enterprise ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဂူးဂဲလ်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အသိအမှတ်ပြုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android Enterprise အကြံပြုစီမံကိန်းဖြစ်သည်သငျသညျပြီးသားသောအကြောင်း ကျနော်တို့ကသူ့နေ့ရက်ကာလ၌စကားပြော။ Android ၏အယူအဆသည်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအား Android တွင်မည်သည့်ဖုန်းကိုရွေးချယ်သင့်သည်ကိုအကြံပြုရန်ဖြစ်သည်။ Nokia သည်ဤစီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်နောက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်.
ဒါဟာမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် Nokia သည်၎င်း၏အနာဂတ်ဖုန်းများကို Android One ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂူးဂဲလ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကျဉ်းမြောင်းခဲ့တယ်။ ယခုဤအတည်ပြုချက်နှင့်အတူ, အမှတ်တံဆိပ်ရှေ့ဆက်အခြားခြေလှမ်းကိုလှမ်း။ သင်၏ဖုန်းအားလုံးသည်စီးပွားရေးအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်.
Android Enterprise အကြံပြုထားသောပရိုဂရမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုစီးရီးနှင့်အတူလိုက်နာရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့လွှတ်ပေးပြီးရက် ၉၀ အတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများကဲ့သို့ရှုထောင့်များ၊ Android 7.0 Nougat ထက် Android version ပိုသည် နှင့်အော်ပရေတာများကပိတ်ဆို့မရ။
ဤပရိုဂရမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်တယ်လီဖုန်းများဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်အခြေအနေများဖြစ်သည်။ Nokia ဖုန်းများသည်၎င်းတို့နှင့်လိုက်ဖက်ပုံရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ဤအစီအစဉ်၏အစမှအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော Nokia 8 သို့ဆက်သွယ်သည်။
ယခု MWC 2018 တွင်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြသောမော်ဒယ်အသစ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Nokia 8 Sirocco၊ Nokia7Plus နှင့် Nokia62018 တို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များနှင့်လည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ၌ဤဂူဂဲလ်ပဏာမခြေလှမ်းသစ်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ Android Enterprise အကြံပြုထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေဟာတိုးချဲ့နေပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းတို့မှရွေးချယ်ရန် ပို၍ လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဆက်လက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် Nokia အတွက်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nokia သည် Android Enterprise အကြံပြုထားသောပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သည်
Android P သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ - အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိရှိထားပါ